Mhepo inotonhorera / hita
Yekutengesa Mhepo Inotonhorera-Dutu Rinoteedzana
Mini Kutonhora-nyuchi Mhepo Inotonhorera
Multi Tower Mhepo Nyanzvi 4 mu1
Nzvimbo Yemhepo Inotonhorera
Shongwe Yemhepo Inotonhorera
Mudiki Guy Yemunhu Mhepo inotonhorera
Muviri Sensor Heater
Shongwe Ultra Yakaonda Heater
Shongwe ine Eco Heater
Yese Kamuri Heater
Lianchuang Boka rakapihwa sepamusoro gumi Zvakatipoteredza Imba Midziyo Export Makambani
Musi waZvita 23, 2020, iyo 8th Internationalization Summit foramu yeChina Elektroniki Appliances Enterprises uye 2020 China Magetsi Chishandiso Export Top 100 Kuburitsa Mhemberero yakabudirira kuitirwa muShunde, guta guru remidziyo yemumba yeChina. Nedingindira re "D ...
Lianchuang's Anotenderedza Feni akahwina iyo "2020 yeGerman iF Dhizaini Mubairo"
Mazuva mashoma apfuura, menduru dze "2020 German iF Design Award" dzakatumirwa kukambani inohwina mubairo - Lianchuang Electric, inova chikamu cheLianchuang Technology Group, yakagashirawo mubairo uyu neyakagadzirirwa yakazvimiririra yePedestal Air Circulator Fan yakatenderera ichitenderera. ..
Canton Fair Global Kugovana - Lianchuang Technology Boka rinorwira zvakare kuCanton Fair iri mugore
Mazuva mashoma apfuura, ye128 China Kunze uye Export Fair (iyo Canton Fair) yakavhurwa zviri pamutemo. Inobatwa nedenda repasirese, gore rino Canton Fair ichiri kuenderera fomu yekuratidzira pamhepo, ichiratidza tekinoroji yeChinese uye zvigadzirwa kune vashandisi kutenderera pasirese. Zvigadzirwa zvinoratidzwa naLianc ...
Lianchuang Technology Group yakaita musangano wekubatana kwekota yechitatu
ne admin pane 20-10-16
Mangwanani eOctober 13, Lianchuang Technology Group yakaita musangano wekubatana kwekota yechitatu ye2020 muLianchuang Academy. Sachigaro weboka Lai Banlai, Vatungamiriri veboka Zhang Yuqi, Chen Ye, Wen Hongjun, Sachigaro Mubatsiri Lai Dingquan nevamwe vatungamiriri, pamwe nemutungamiriri akasiyana weboka ...
Mhepo inotonhorera inogona kushandiswa kupisa muchando here?
Mhepo inotonhorera inogona kushandiswa kupisa muchando. Mhepo inotonhorera yakakamurwa kuita maviri marudzi: imwe imwe firiji yerudzi rwemhepo inotonhorera, uye imwe inotonhora uye kupisa kaviri-kuita mhepo inotonhorera. Iyo yekutanga inogona kungove firiji, uye iyo yekupedzisira haingogone chete kuita firiji asiwo kupisa, asi iyo ...
Ndeupi musiyano uripo pakati pemhepo inofefetera mhepo uye inotonhorera emhepo?
ne admin pane 20-10-12
Mhepo inogadziridza ndiyo inowanzoshandiswa kutonhora maturusi muzhizha. Ivo vanowanzo gadziriswa. Kuti zvive nyore, kune nharembozha maairimendi uye maacircon emusika, uye hapana kana imwe yakagadziriswa. Saka ndeupi musiyano uripo pakati peanofambisa mhepo mahara uye maacircon? 1. Chii ...
Kuchengeta Mutambo weMid-Autumn uye kupemberera Zuva reNyika, Dare reParty reLianchuang Sayenzi neTekinoroji Park vakaita mutambo wechiitiko cheyakagadzirwa nemaoko echando mwedzi keke
Iyo rimwe gore rekuonanazve mwedzi, uye rimwe gore reMid-Autumn Mutambo. Pane chiitiko cheMid-Autumn Mutambo, kuitira kuti munhu wese anzwe runako rwechinyakare tsika tsika uye kugadzira yakasimba mhemberero mamiriro, manheru eSeptember 22, Lianchuang Science uye Technology Pa ...
27th Anniversary yeLianchuang, Shenzhen Mweya
ne admin pane 20-09-14
Guta rine mweya waro wakasiyana. KuShenzhen, vamwe vanhu vanoti, "Haugone kudzokera kumusha, uye haugone kusiya Shenzhen futi". Chatinonzwisisa zvakanyanya nezve uyu mutongo ndechekuti pamwe kunze kweShenzhen, hauzombowana mweya wakasarudzika wakasarudzika uye kunzwa kunoumbwa nemweya wedhorobha ...
Nyowani Chigadzirwa Kuvhura Tafura Bata Hita DF-HT5385P
ne admin pane 20-09-09
Nekuvandudzika kwenzanga uye hupfumi, vanhu vazhinji uye vazhinji vanorarama vakazvimiririra, uye nazvo zvinouya kusarudzika kwezvinodiwa zvezuva nezuva. Kuti usangane nezvinodiwa mumusika, yedu Tafura Bata Hita DF-HT5385P yakavepo. Simba diki asi simba hombe. Kutanga, ngatitarisei pazviri zvakadzama ...
Kubwinya uye Zviroto - Lianchuang's 27 makore ekukura
Kubwinya uye Zviroto - Lianchuang's 27 makore ekukura Muna 1993, Chigadzirwa chekutanga chaLianchuang chakabuda Pasi brand radio Rwiyo rwakauya kubva kuredhiyo pakati pehusiku Senge kurira nzeve Muna 1998, Yekutanga mudzimba mweya unotonhorera wakabuda Lianchuang brand mweya unotonhorera. Muna 2000, wokutanga paten ...
Lianchuang Appliance yakahwina Red Dot Mubairo - iyo "Oscar" mubairo muKugadzira Indasitiri Kwemakore mashanu Akateedzana.
ne admin pane 20-09-01
Munguva pfupi yapfuura, nyika inozivikanwa yeGerman Red Dot Mubairo 2020 yekukunda runyorwa yakaziviswa. Iyo yepfungwa chigadzirwa Convection hita yakagadzirirwa neLianchuang Appliance, chikamu cheLianchuang Technology Group, yakadomwa kubva kunopfuura nyika makumi matanhatu pasirese, uye ndokuhwina iyo "Red Dot Design Conc ...
Wakatenga fan inotenderera asi ukaishandisa seye fan yechinyakare? Iwe unofanirwa kunzwisisa aya mapoinzi!
ne admin pane 20-08-22
Zhizha rasvika, uye kuwanda kwevateveri kuri kuwedzera uye kukwira. Sekutanga pakati pevateveri, mafeni ekufambisa mweya anoita kunge asina kusiyana neakajairika-akamira mafeni emagetsi, asi pamutengo uyu, tinoziva kuti izvi zviviri hazvifananidzwe. Asi kuchine vanhu vazhinji vakatenga mweya ...
Shenzhen Lianchuang Technology Boka Co, Ltd inosanganisa R & D, kugadzira, kutengesa uye masevhisi, ukuwo inonamira kune-yega-hunyanzvi nehungwaru hwezvinodiwa nevatengi.
Taura nesu ikozvino